Nepal Tourism: Nịm maka 6th NewBiz Conclave & Awards
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » Nepal Tourism: Nịm maka 6th NewBiz Conclave & Awards
Akụkọ mkpakọrịta • Awards • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Nepal • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Emechara nkwadebe niile maka mmemme NewBiz Conclave & Awards nke emere na Fraịde, Septemba 27, 2019 na Kathmandu's Soaltee Crowne Plaza. Ihe omume nke afọ a na-adaba ma na-eme ememe Tourbọchị njem nlegharị anya nke ụwa. Ndị mba ọzọ niile sonyere na Conclave abịarutela na Kathmandu ma ndị kọmitii juri na-ahọrọ ndị niile na-enweta nturu ugo.
Mịnịsta na-ahụ maka ego bụ Dr. Yubaraj Khatiwada anabatala ịbụ onye isi ọbịa nke mmemme ahụ nke ndị ọkachamara dị elu 500 sitere na ngalaba ọha na nke onwe ha gụnyere ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị ọrụ gọọmentị, ndị isi azụmaahịa si ụlọ akụ, njem na njem na azụmahịa ndị ọzọ yana ndi mmuta.
Nke a bụ emume a na - eme kwa afọ nke New Business Age kemgbe afọ 2013. Ihe Eshia Eshia bụ Onye Nkwado Mbụ maka ihe omume a dịka ọ dị na afọ ndị gara aga. Emereghị ihe omume ahụ na 2015 n'ihi ọnọdụ iru ala nke mba ahụ na-agafe na afọ ahụ na-esote Ala ọma jijiji Gorkha.
Ka Nepal na-eleta Gaa leta Nepal Afọ 2020, afọ a a na-elekwasị anya na isiokwu bụ "njem nleta na ịba ọgaranya: ringkekọrịta Omume Kachasị Mma" iji nyere aka na mkpọsa mba a. Ihe omume nke afọ a na-akwado nleta Nepal 2020 ma na-eme ya na nzukọ Association Association Nepal. N'otu aka ahụ, Allọ Ọrụ Njem Nleta Nepal na-emekọrịta na nke a dị ka Onye Nkwalite.
Na Conclave, ndị nnọchi anya Mekong Tourism Coordinating Office, Bhutan na Laos ga-ekerịta ahụmịhe obodo ha ma ọ bụ mpaghara ha n'ịkwalite na mmepe njem. Maazị Jens Thraenhart, onye isi oche nke Mekong Tourism, Maazị Sonam Jatso, Onye ọchụnta ego na njem nlegharị anya nke Bhutan na Maazị Bounlap Douangphoumy, osote onye isi nchịkwa nke Ngalaba Azụmaahịa nke Ozi nke Ozi, Ozi Omenala & Njem Nleta nke Laos na-eme atụmatụ ha. Nwada Shreejana Rana, Onye isi oche nke Associationlọ oriri na ọ makeụ Hotelụ nke Association Nepal ga-eme ihe ngosi sitere na Nepal.
Mgbe ihe ngosi ndị a gasịrị, a ga-enwe mkparịta ụka mkparịta ụka maka njem nlegharị anya nke Nepal n'etiti ndị nnọchi anya ọha na ndị ọha na eze. Ndị otu ahụ gụnyere Ghanashyam Upadhyaya, Secretary Secretary na Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Suraj Vaidya, Onye Nchịkọba nke nleta Nepal 2020, Deepak Raj Joshi, onye isi nke Nepal Tourism Board, Khem Lakai, onye isi nke Global Academy of Tourism & Hospitality Education , Prachanda Man Shrestha, onye bụbu onye isi nke Nepal Tourism Board na Upaul Majumdar, onye isi njikwa nke Soaltee Crowne Plaza. Pankaj Pradhananga ga-ahazi ya, onye isi njem na njem anọ.
Onu ogugu maka ahia ahia
Conclave ga-esochi ya site na mmemme nke ụlọ ọrụ 21 na otu onye ga-enye nsọpụrụ pụrụ iche. Ya mere onyinye ga-abụ 1 (otu) ụlọ ọrụ kachasị mma, ụlọ ọrụ akụ na ụba 12 na ụlọ ọrụ ego, 6 (isii) ụlọ ọrụ mkpuchi kachasị mma na ụlọ ọrụ 2 (abụọ) kachasị mma.
N'otu aka ahụ, a ga-eme ka otu onye ọchụnta ego raara onwe ya nye Onye Ọchịchị na-asọpụrụ Ndụ ya na-amata ọhụụ ya na onye ọhụụ ọhụụ ogologo oge n'ọhịa.
E kewapụrụ kọmitii ndị jury pụrụ iche gụnyere ndị ọkachamara nọọrọ onwe ha, ndị nwere ahụmịhe na ndị mmadụ na-asọpụrụ mmadụ iji họpụta ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu maka onyinye a. Kọmitii ndị juri niile emechala nhọrọ ndị ahụ dabere na njirisi dị iche iche ha kpebiri maka otu otu.
Ndị ọzọ na-akwado mmemme nke afọ a gụnyere Sipradi Trading, Norlọ Ọgwụ Norvic, Nimbus, Turkish Airlines, National Insurance, Nepal Life Insurance, IME, Soaltee Crowne Plaza, President Travels, Ballentine, Saujanya Media na Durga Engineering.